मेरो लागि ब्लगिङ एउटा स्व-अध्ययनको सुत्र बनेको छ : अनन्दिता गुरुङ - MeroReport
मेरो लागि ब्लगिङ एउटा स्व-अध्ययनको सुत्र बनेको छ : अनन्दिता गुरुङ
यसैवर्षको अन्त्यतिर काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर गर्ने तयारीमा रहेकी उनी अर्थात अनन्दिता गुरुङ बगैंचामा रुमल्लिन, नयाँ-नयाँ ठाँउ घुम्न तथा विभिन्न विषयका किताब पढ्न असाध्यै मन पराउँछिन । यसका अलावा आन्नदिता सोसल मिडिया र ब्लग लेखनमा पनि उत्तिकै सक्रिय छिन । मेरोरिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा आज हामीले उनै अनन्दिता गुरुङलाई प्रस्तुत गरेका छौ । प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानी :
अनन्दिता गुरुङलाई के भनेर चिन्ने बताइदिनुस न ।
मेरो ब्लग पढ्ने पाठकहरुलाई त थाहा नै होला म एकदम सामान्य केटी हुँ र किताब पढ्न, बगैचामा काम गर्न र ब्लग लेख्न रुचाउँछु ।
यो कार्तिकमा १ वर्ष ५ महिना हुन्छ ।
केका लागि ब्लगिङ गर्नुहुन्छ ? ब्लगिङ गर्न कस्ता कस्ता चुनौतीहरु छन्?
लेखन मेरो सौख हो । यहि सौख पुरा गर्न र आफ्नो कुरा राख्न ब्लगिङ गर्छु । तपाईमा इच्छा छ भने यो कुरा सजिलो छ । ब्लगिङलाई निरन्तरता दिने बाहेक खासै केहि चुनौती देख्दिन ।
मेरो ब्लग तपाईहरुले बढी जसो मैले भोगेका कुरा पाउनुहुन्छ । मलाई प्राय: आफुलाई उत्प्रेरित गर्ने कुराहरु उल्लेख गर्न मन लाग्छ । स-साना कुराहरुमा म गहिराई देख्छु र त्यो कुराबाट आफुले सिकेका पाठ अरुसँग बाड्ने प्रयत्न गर्छु । अनि यस्तै कुराहरु ब्लगमा हाल्न उपयुक्त ठान्छु । यसका साथसाथै निरन्तर किताब पढ्ने पाठकहरुसँग मासिक रुपमा 'किताब-वार्ता' नामक अन्तरवार्ता लिने गर्दछु ।
तपाँइले चलाउने ब्लग http://zappylily.blogspot.com/ मात्रै हो कि यस बाहेक अरु पनि छन् ?
मैले चलाउने यहि मात्र हो तर http://anotherverse.wordpress.com/ मा पनि कहिलेकाँहि योगदान गर्छु ।
तपाईको ब्लगको नाम 'मेलोडिज, मेमोरिज एण्ड मिस्टेक' कसरी राख्नुभयो ? बताईदिनुस न ।
पहिले नाम अर्कै थियो । पछि मेलोडिज, मेमोरिज एण्ड मिस्टेक राखें । म जे.के रोवल्ङिवाट प्रभावित छु । उनले पनि कुनै पात्रको नाम राख्दा एउटै अक्षरबाट सुरु गर्छिन् । मेरो ब्लगपोष्टहरु पनि त्यस्तै हुन्छन् । मेमोरिज अर्थात सम्झना, मेलोडि अर्थात सुर अनि मिस्टेक अर्थात भुल, यी सबैको समग्र रुप मेरो ब्लग भएको हुनाले यो नाम रोजेकी हुँ ।
मैले ब्लगिङ शुरु गर्दा पहिले नेपाली ब्लगरहरुको ब्लग पढ्थें । निकै प्रतिभाशाली ब्लगरहरु छन् अहिलेसम्म दुरुपयोग भएको थाहा पाएको छैन ।
अरुको ब्लग पढ्छु । सुचनामूलक भन्दा पनि भाषाको सहज प्रयोग भएको रमाइला दृष्टान्त तथा लघुकथा पढ्न रमाइलो लाग्छ साथै बागवानीसँग सम्बन्धित ब्लगहरु पनि हेर्छु ।
सामाजिक हित भन्दा पनि सामाजिक परिवेशमा लेखिएका ब्लग धेरै पढेको छु र नेपालमा सोसल मिडियाको राम्रो पकड छ जस्तो लाग्छ ।
एकदम नै जरुरी छ । ब्लगिङको नाममा आफ्नो कक्षाको नोट राख्ने देखि लिएर अरुका कथाहरु सार्ने गरेको देखेकी छु । त्यसैले आचारसंहिता धेरै नै खाँचो छ । विशेष गरि भर्खरै सुरु गर्ने ब्लगरहरुका लागि आचारसंहिता आवश्यक छ ।
सोसल मिडियालाई सकेसम्म राम्रो कारणको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । मन परेको ब्लगलाई लाईक र शेयर गरे पाठकहरु बढ्छन् र ब्लगरलाई प्रोत्साहन मिल्छ । मेरो वरिपरी भएका युवा साथीहरुले यसको सदुपयोग नै गर्नुभएको जस्तो लाग्छ तर धेरैलाई साहित्यिक चोरीका बारे थाहा नभएकाले यसको चेतना आवश्यक छ जस्तो लाग्छ ।
ब्लग लेखन वा ब्लगमा समेटिएका सामग्रीसँग जोडिएका कुनै रमाइला घटना वा प्रसंग भए बताइदिनुस न ।
रमाइला घटनाभन्दा पनि ब्लगिङ गरेर मेरा धेरै अवसरका बाटोहरु खोलेका छन् । ब्लगिङबाट मैले धेरै मान्छेहरु चिन्ने मौका पाएँ । आफुलाई कुन कुरामा लगाव छ देखि लिएर म भित्र आएको परिवर्तनलाई नियाल्ने मौका पाइरहेको छु । मेरो लागि ब्लगिङ एउटा स्व-अध्ययनको सुत्र बनेको छ ।
ब्लग आफ्नो ठाँउ हो । यहाँ आफुलाई मन लागेको जे पनि गर्न मिल्छ । आफ्नो खुशी अभिव्यक्त गर्नुस वा मनको भावलाई सम्हाल्न कविता कोरेर पोष्ट गर्नुस्। यो तपाईको आफ्नो निजी ठाँउ हो । अनि फेसबुक चाहिँ ब्लगको प्रचार गर्न प्रयोग गर्छु । ट्वीटर रमाइलो छ, अनेकौं प्रकारका मान्छेहरु भेटिन्छन, फेसबुकमा भन्दा ट्वीटरमा समालोचना अलि थोरै हुन्छ । जति ट्विट गरे पनि हुने, त्यसैले मलाई फेसबुक भन्दा ट्विटर मन पर्छ ।
ब्लगिङ नागरिक पत्रकारिता हो जस्तो लाग्छ, कुनै देशका कुना काप्चाका खबर लिएर जनताको माझ पुर्‍याउने काम पत्रकारको मात्र नभएर आम जनताको कर्तब्य पनि हो ।
धन्यबाद । यहाँ एउटा प्रश्न छुटे जस्तो लाग्यो । ब्लगको लेआउटको भूमिका बारे, लेख जति राम्रो भए पनि ब्लगको लेआउट(अक्षरको रङ, पृष्ठमुमि, अक्षरको साइज)ले निकै भूमिका खेल्छ । यो नयाँ ब्लगरहरुले याद गर्नुहोला ।
Comment by Amuna Chapagain on November 5, 2014 at 5:27pm
Congratulations Anandeeta jee !!